Buy PF 750 (959151-50-9) mpamatsy hplc≥98% | AASraw Fat Loss
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / PF 750
Rating: Sokajy: Vokatry ny vinaingitra Tags: Buy PF 750, PF 750, PF 750 for sale, PF 750 mpamatsy
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny PF 750 (959151-50-9), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
PF 750 dia marefo, ary miankina matetika amin'ny asidra, ny asidra fadiranidana (FAX) amin'ny atidoha (IC50 = 16.2 nM) izay tsy mampiseho ny asany amin'ny fahasamihafana hafa amin'ny serine. Manosika ny FAAH ao anatin'ny rafi-pitabatabana izy io. miaraka amin'ny sanda IC50 0.6 sy 0.016 μM rehefa voavolavolan'ny FAAH ho an'ny 5 sy 60 ho an'ny olombelona. Ny asidra fadida amide hydrolase (FAAH) dia ny enzyme tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ny hydrolyse sy ny fanafoanana
I.PF 750 ireo karazana fototra:
Meny fitetezana 300.48
II. PF 750 fampiasana amin'ny famaranana:
2.Ianao ve ny asa ho an'ny PF 750?
Ny PF-750 dia natolotra ho vovoka kristaly. Ny vahaolana tahirin-tsakafo dia azo atao amin'ny famongorana ny PF-750 amin'ny solventsa voajanahary miaro amin'ny gazy midadasika. Ny PF-750 dia vonton-javatra amin'ny solvents organiques toy ny ethanol, DMSO, ary dimethyl formamide (DMF). Ny tsy fahampian'ny PF-750 amin'ny ethanol dia manodidina 1 mg / ml ary manodidina ny 20 mg / ml amin'ny DMSO sy DMF. Ny PF-750 dia miadana be ao anaty paompy mandoaka. Ho an'ny solosaina faran'izay kely ao anaty paompy, ny PF-750 dia tokony ho levona aloha ao amin'ny DMSO ary avy eo dia mihalevina miaraka amin'ilay buffer safidy. Ny PF-750 dia manana ny 0.125 mg / ml eo amin'ny 1: 5 vahaolana DMSO: PBS (pH 7.2) mampiasa io fomba io. Tsy mandrisika ny fikarakarana ny vahaolana enti-mavesatra mandritra ny andro maromaro.
3.Jereo ao amin'ny PF 750
Ho an'ny famolavolana tsaratsara kokoa, afatory amin'ny 37 ° C ny fantsona ary avereno ao anaty bain-nify. Ny mpanamboatra samihafa dia samy manana ny antonony amin'ny solosaina, raha ny fijerena azy fotsiny. Raha ny fitomboan'ny voka-bary takiana ho an'ny fanandramana dia lehibe loatra amin'ny fetran'ny solika, ampio solventsy iray hanampy ny fanapotehana na hanova ny fifantohana amin'ny tenanao.
IV. Ahoana no hividianana PF 750 avy any AASraw?
Aoka ho voalohany hijery ny "PF 750" hanafoana ny valin-
Bupropion HCL poids